Iindaba-Qaphela ezo zinto xa kuthengwa izihlanganisi zamandla
Isinxibelelanisi samandla okuthenga asinakuba ngumntu ukugqibezela, zininzi amakhonkco, kwiingcali ezininzi ukuba zithathe inxaxheba, umntu onokuwaqonda ngokwenene amandla akumgangatho wesinxibelelanisi, isinxibelelanisi ukuma okanye ukuwa kwecandelo ngalinye kunokwenza , Abanye abantu babamba ixabiso lesidibanisi, xa kuthethathethwana amaxabiso anokufezekisa ngokufanelekileyo, abanye abantu bafuna ukwazi iinkcukacha ezifanelekileyo zekhontrakthi, kunye nesisombululo seengxaki, ke, ngexesha lokuthenga izihlanganisi ezinkulu zangoku, imfuno ayisiyiyo Umntu kodwa liqela elikhulu, iqela kufuneka kuyo yonke imiba yokuqokelelwa kwetalente, kuphela ngale ndlela, Ukukhetha uphawu lokudibanisa oluhle kakhulu.
Ufuna ukuba ngumthengi olingeneyo kumthengi akukho lula kakhulu, ngakumbi kwisinxibelelanisi esixubekileyo kwintengiso namhlanje, ukuba ufuna kwiimpawu ezininzi zokunxibelelana ukuze ukhethe iimveliso ezingabizi kakhulu kwaye zilungile, kufuneka uphuhlise ukubaluleka, ukuba akunjalo, kunokwenzeka ukuchitha ixesha elithile, kodwa awukabikho ukhetho kwimveliso elungileyo.
Kukho iinkcukacha-manani ezineenkcukacha kubanikezeli beenkonzo abaninzi kwimarike. Njengoko isitsho le nto, kuphela kukuthelekisa esinokuthi siphephe ilahleko. Kuphela kungokuthelekisa okunenkcukacha esinokuthi siqokelele iimveliso ezibalaseleyo. Kule mihla, baninzi abathengisi bezinxibelelanisi kwimarike yasekhaya, kwaye iimveliso zahlukile. Ewe kunjalo, xa uthenga, nokuba umgangatho ngowokuqala okanye ukusebenza kwexabiso lelokuqala. Ukuba awujongi kuluhlu lwamaxabiso kunomgangatho, kukhethwe kakuhle kakhulu. Nangona kunjalo, ngenxa yokuthintelwa kweendleko, amashishini amaninzi akhetha iimveliso ezinendleko eziphezulu zokusebenza, ezifuna umgudu omkhulu wokuthelekisa iimveliso ezahlukeneyo kunye namaxabiso. Yonke imiba yokunxibelelana nabathengisi ifuna inkqubo, ke akufuneki ukuba sinyanzele, sizole ngexesha lodliwanondlebe, kwaye sifumane indawo efanelekileyo eyamkelekileyo kuwo omabini amacala.
Esinye isiqingatha kukujonga umgangatho. Ngenxa yokuba isinxibelelanisi yimveliso yohlobo lweodolo, umgangatho kufuneka ulandelwe ngokusondeleyo, kwaye umenzi makangenzi iimpahla ezimdaka okanye asike iikona. Yonke le nkqubo ifuna abasebenzi abaziingcali ukuba bajonge kwaye bamkele ukuthintela inani elikhulu leemveliso ezineziphene. Ke ngoko, yonke inkqubo yokuthenga isixhobo sokudibanisa amandla ayisiyonto ilula kakhulu. Ukongeza, ukubaluleka kwesihlanganisi kufuna ukuba abasebenzi abasebenza kwinkampani babe noxanduva lokuthenga.
I-NBC Electronic Technological Co, Ltd. (NBC), eyasekwa ngo-2006, injongo yethu yile: ukwenza imveliso yodidi, ukulawula umgangatho weklasi yokuqala. Sinendawo ebanzi yezihlanganisi ezikhawulezayo, izihlanganisi zeshishini, izihlanganisi zamandla, izihlanganisi zebhetri, izihlanganisi zokutshaja, izihlanganisi zombane, isinxibelelanisi esikhoyo ngoku, iimveliso zamandla kaAnderson, izihlanganisi ze-APP, izihlanganisi zemodyuli, izihlanganisi zebhetri njalo njalo. Ngonyaka ka-2019, sasiye phesheya kwaye sikhuphisane kwimarike yamanye amazwe.
Ukuba unazo naziphi na izimvo kunye neengcebiso malunga neemodyuli zethu zonxibelelwano, nceda tsalela abasebenzi benkonzo.
Nceda ungene kwiphepha lethu https://www.houdpower.com ukwazi ngakumbi malunga nezihlanganisi zemodyuli.
Ixesha Post: Oct-17-2019